Semalt: Izimfihlo zeHackers Abafuni Ukuzi
api 1 org 895
Inkambu Yezokwaziswa Nezobuchwepheshe ihambisana nezinto ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo,amabhizinisi amaningi athatha izindlela zokuhweba nge-e-commerce, okufaka ukubeka amawebhusayithi namabhulogi ukuze akwazi ukukhankasela imikhankaso yabo yokumaketha.Kukhona amathuluzi amaningi amasha, aqondisa abantu ngokusebenzisa inqubo eyinkimbinkimbi yokwakha amawebhusayithi. Ngesilinganiso esifanayo, amathuluzi anakhoUkusetshenziswa kwe-hacker nakho kuyaqhubeka njengoba beba ngcono futhi beba ngcono. Abaqaphi bachitha ulwazi oluningi lomuntu siqu kanye nokunyeolunye ulwazi, olungabaluleka.
Bangakwazi ukushaya i-website bese bekhipha ulwazi olufana nekhadi lesikweletuulwazi kanye nolunye ulwazi oluwusizo. Ngenxa yalokho, abantu kufanele baqaphele lokhu kuhlaselwa kanye nezinye izinto eziningi ezikhonai-hacker ingayenza. Abantu abaningi bazibuza ukuthi abashayeli benza kanjani ukuxhaphazwa kwabo ngezinga eliphakeme kangaka lokugqwesa. Ngolunye ukugwema abadunifuthi kusinde imizamo yokuhlaselwa, kunesidingo sokuqonda ukuthi abakwaHackers bahlasela kanjani amawebhusayithi.
Ezinye zezinyathelo nezindlela zabo zikhona kule nhlahlandlela, elungiselelweUFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDividenti
Lokhu kuhlasela kuhilela ukuhlasela amawebusayithi angalungile ukuze afundedatabase yabo. Le hack ithatha ulwazi lomuntu siqu ezifana namakhadi esikweletu, amagama abasebenzisi namaphasiwedi. I-SQL Injection yenzeka isebenzisa okukhethekileamathuluzi, angakwazi ukufunda uhlobo lwe-database futhi athole ulwazi olufanele lwamakhasimende. Le ndlela ingakwazi ukwenza idatha yokuhlela i-hacker, ulayishenoma ulande amafayela kusuka ku-database ngokufinyelela okude.
i-Cross Site Attack..
Lokhu kuhlasela kuhilela ukwenza ukusetshenziswa kwezici zokufaka umbhalowebhusayithi. Lokhu kuhlasela kuhilela ukwenza ukuthi isisulu sicindezele isixhumanisi noma ifayela elidluliselayo. Ngenxa yalokho, iskripthi sithinta isiphequluli. I-hackeruthola ukufinyelela njenge-cache, kanye namaphasiwedi kunoma iyiphi iwebhusayithi. Ungavimbela lokhu kuhlaselwa ngokubetha ulwazinjengethula indlela yokwenza ikhodi yesimanje njengoba ulwazi ludlula phakathi komsebenzisi nesiphakeli.
Lawa mawebhusayithi ama-clone, angakhohlisa umsebenzisi ukuthi anikeidatha yokungena ngemvume ekhasini eliyisikhohlisi. Ukwaziswa umsebenzisi angena kungabaluleke kakhulu ekuvikelekeni kwedatha yedatha. Ukuhlaselwa kobugebengu,umsebenzisi uthola idatha ebalulekile njengamaphasiwedi kanye nokuthola ukungena kwiwebhusayithi. Ezinye izimo zalokhu kuhlaselwa kuholela ekudalweni kwe-aiwebhusayithi kwizinjini zokusesha ezibangela ukulahlekelwa okukhulu kwenkampani.
Ukuhlaselwa phakathi kwabantu.
I-intanethi isho konke ngokushintshanisa idatha. Kuwebhusayithi, aumsebenzisi uthumela futhi uthola idatha kusuka kuseva noma database. Njengoba idatha idlulela, kunobungozi obuthile, okwenzeka kunoma yisiphi isigaba se-inqubo. Umuntu ophakathi uhlaselela izinhloso ekutshontseni lolu lwazi, okungaba khona ekuhoxiseni okukhulu kolwazi lenkampani.
Abaqaphi baqeda izigidi zemali ngokukhwabanisa nezinye izindlela. Bangela abaningiukulahlekelwa okungenzeka kanye nokubangela inkathazo nokuhlukumeza izisulu zabo. Izinhlobo eziningi zokuhlaselwa ngokuhlaselwa ziphumelela ngenxa yobungozi abaningikusezinhlelo eziningi ezijwayelekile. Kukhona isidingo sokuba nolwazi olwanele lwalezi zihlaselo. Ukuphepha kwewebhusayithi yakho neyakhoamakhasimende ancike ekusebenzeni kwezinyathelo ezinjalo. Ungafunda ukuthi abaduni baphumelela kanjani ukungena ngokusebenzisa le mhlahlandlela.